Malunga nathi - Shenzhen Chinaok Izixhobo zombane Co., Ltd.
I-SASELUX yasekwa ngo-2011 kwaye ibekwe eShenzhen, China. Inkampani yethu igxile kwiimveliso zokukhanyisa ngokungxamisekileyo, kubandakanya ukuphuma kwemiqondiso, izibane ezingxamisekileyo, abaqhubi bexesha likaxakeka, umtshisi wokutshaya njl. Njl. -COC, ISO njl. Ukuze ngcono iimveliso zethu kunye neenkonzo, siya Canton Fair, Frankfurt Exhibition eJamani kunye Hong Kong Exhibition minyaka le. Singafumana uninzi lwabathengi ngalo lonke ixesha.
"Ukunyaniseka, ukuthembeka, ubuGcisa, kunye nokuShishina" njengemilinganiselo yenkampani yethu eyenza ukuba inkampani yethu iphuhle kwicandelo lokuKhanya okungxamisekileyo ixesha elide kwaye iphumelele iimbasa. Sisoloko sibambelele kwisicwangciso esijolise kwimarike, sisebenzisa iimveliso rhoqo kunye nokuphucula itekhnoloji. Sizibophelele ekunikezeleni abathengi ngowona mgangatho uphezulu, ixabiso elikhuphisanayo kunye neenkonzo ezinolwazelelelo. Sisoloko sijonga iimveliso ngaphambi kokuhambisa. Ukuba kukho naziphi na iingxaki kwimveliso emva kokufumana, unokuqhagamshelana nathi ukuyijonga. Iiprojekthi ze-OEM kunye ne-ODM zezona sizizo. Ukuba iodolo inkulu ngokwaneleyo, sinokwenza ngokwezifiso ukupakishwa kunye nelebheli yemveliso simahla. Sinefektri yethu enkulu. Kukho abasebenzi abangama-200 kumzi-mveliso wethu. Ke awudingi ukuba nexhala malunga nonikezelo lwempahla.
Iqela lenkampani yethu liqeqeshiwe kwaye linomonde. Singazisombulula iingxaki zabathengi kakuhle. Ke ukuba unawo nawuphi na umbuzo malunga neemveliso zethu, nceda unxibelelane nathi. Ukuze wenze olona hlobo lululo kunye nokuphucula inkonzo, siyaqhubeka sonyusa isikali seshishini lethu kwaye siphucula ulwazi oluphambili.
Nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi! Wamkele nayiphi na imiyalezo!